Fri, Mar 22, 2019 | 11:40:10 NST
काठमाडौं, माघ २४ – आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टू बिहीबारदेखि नामिबियामा सुरु हुँदैछ । नेपालले प्रतियोगिताको यात्रा घरेलु टिम नामिबियाविरुद्धको खेलबाट सुरु गर्दैछ । नामिबियाविरुद्ध उत्रनु अघि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्कासँग हामीले कुरा गरेका छौं ।
बिहीबार हुने नामिबिया विरुद्धको खेलका विषयमा के भन्नु हुन्छ ?
प्रतियोगिताको पहिलो खेल हो । राम्रो क्रिकेट खेल्न जरुरी छ । नामिबिया घरेलु टोली हो । त्यसैले नेपालले आफ्नो क्षमता अनुसारको खेल प्रदर्शन गर्नुपर्छ । सबै टिम उत्तिकै बलिया छन । नेपाली टिम कन्सिटेन्सीमा फोकस छ । हामी खेलका लागि तयार छौं । नेपालले केही कुरालाइ पनि हल्का रुपमा लिन हुन्न ।
पहिलो खेलमा जित हात पार्नै पर्छ भन्ने खालको प्रेसर छ की छैन ?
हरेक खेल महत्वपुर्ण छ । पाँच खेल छन् हामी सँग । पाँचै खेल उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । यति हो की हामीले राम्रो सुरुवात गर्नुपर्छ ।
नामिबिया विरुद्ध नेपालको पछिल्लो समयको रेकर्ड राम्रो छ । यसले टिमलाइ कत्तिको सकारात्मक उर्जा दिन्छ ?
त्यो विगत हो । हामीले राम्रो क्रिकेट खेल्नुको विकल्प छैन । रेकर्ड राम्रो छ । तर, भोली दुवै टिमका लागि नयाँ दिन अनी नयाँ खेल हो । नयाँ प्रतियोगिता हो । सबैले फ्रेस स्टार्ट गर्नुपर्छ ।
रोहित पौडेलले बिहीबारको खेलमार्फत राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गर्ने संभावना छ ?
त्यो बिहीबार विहानको टिम मिटिङ पछि निर्णय गरिनेछ ।
पछिल्लो समयको नामिबिया टिमलाइ कसरी लिनु हुन्छ ?
नामिबिया लगायत सहभागी सबै टोली राम्रा छन् । त्यसैले आफूलाइ राम्रोसँग अगाडि धकेल्न आवश्यक छ ।